‘प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामै गर्न दिनुभएन, नत्र यस्तो अवस्था आउने थिएन’- उपेन्द्र यादव ! – ताजा समाचार
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले सीमा बन्द गर्नेदेखि लिएर ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको छ । १५ दिनदेखि देश ‘लकडाउन’मा छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै जनता आ–आफ्नै घरमा छन् । यही सन्दर्भमा सरकारका काम कारबाहीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यसअघि २० महिनासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानी अहिले विश्वभरी फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) लाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
–कोरोनाभाइरस जसलाई ‘कोभिड–१९’ नाम दिइएको छ, चीन हुँदै लगभग २०६ वटा देशमा यो फैलिसकेको छ । यसलाई यो शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो महामारीको रुपमा लिइएको छ । अल्पविकसित वा कम विकसित मुलुकमा मात्र होइन, शाक्तिशाली मुलुकहरु पनि यसबाट नराम्री प्रभावित भएका छन् ।
यसको प्रभावलाई रोक्न, न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल जस्ता देशहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक रुपले निकै समस्या परेको छ ।
भारतजस्तो लोकतान्त्रिक तथा विशाल जनसङ्ख्या भएको देशमा पनि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यही भएर यसको प्रभावबाट बच्नका लागि हामी गर्ने काम भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको निर्देशिका र निर्देशनलाई पालना गर्ने र तत्काल मास स्केलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नै हो ।